ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အိမ်တွင်းမှုရေးရာအဖြာဖြာ…😎 – Trend.com.mm
အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖုိ့ အချိန်တွေအများကြီးပေးနေရပြီလား။လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင် ဒီလိုအိမ်သန့်ရှင်းရေးတွေ၊အိမ်အလုပ်တွေလုပ်ရတာ မိန်းကလေးတွေအတွက် ၂.၆နာရီကြာမြင့်ပြီး ယောကျာ်းလေးတွေကတော့ ၂.၁နာရီကြာမြင့်ပါတယ်တဲ့။အချိန်တွေအကြာကြီးလုပ်နေရရင် အဆင်မပြေ
ဘူးလေနော်။ဒါကြောင့် Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် မြန်လည်းမြန်မယ်။အလုပ်လည်းတွင်မယ့်လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ချို့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၀ိုင်နီစွန်းရင် ၀ိုင်ဖြူနဲ့ပြန်ဆေး ပြန်လျှော်ရတယ်လို့ကြားဖူးပေမဲ့ အဲ့လောက်ကြီးအကုန်မခံပါဘူးနော်။အမြန်ဆုံးနဲ့အသန့်ရှင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးက စွန်းထင်းသွားတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကို ဆားဖြူးလိုက်ပါ။အချိန်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆားက ၀ိုင်နီတွေကိုစုပ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတဲ့အခါကျမှ ဆပ်ပြာလေးနဲ့လျှော်ဖွပ်လိုက်ရုံပါပဲ။အချိန်ဆွဲနေလေ ၀ိုင်နီတွေချွတ်ရခက်လေပါပဲ။
*အကျီမှာ မှင်တွေစွန်းကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? 🤔
အကျီအိတ်မှာဘောပင်န်ထည့်တတ်တဲ့သူတွေမကြာခဏကြုံရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့တော့။ဒီမှင်တွေကိုဖျက်ဖို့ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းက အဲ့အစွန်းအကွက်နေရာကို အရက်အနည်းငယ်ဖြန်းလိုက်ပါ။ပြီးရင် ၁၅မိနစ်လောက်အရက်ထဲမှာစိမ်ထားပါ။အရောင်တွေကျွတ်သွားပြီဆို လျှော်နေကျအတိုင်းလျှော်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ရေခဲသေတ္တာတစ်ပတ်တစ်ခါသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ့်အစား နှစ်ပတ်တစ်ခါမှဆိုရင် အိမ်ရှင်မတွေ တော်တော်သက်သာသွားမှာပါ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?ရေခဲသေတ္တာတစ်ထပ်စီမှာ fridge mat လေးတွေထားပေးရုံပါပဲ။ဒါလေးတွေခင်းပေးထားရင် တစ်ပတ်နဲ့ညစ်ပေရှုပ်ပွတာက ၂ပတ်လောက်သန့်ရှင်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့အခင်းလေးတွေညစ်ပတ်သွားရင် အဲ့ဒါလေးတွေယူပြီးလျှော်၊ပြီးရင်ပြန်ခင်းပေးလိုက်ပေါ့။ဒါဆို ရေခဲသေတ္တာကိုတိုက်ချွတ်ပေးရတာသက်သာသွားတာပေါ့။
*ကြွေထည် အိုး၊ပန်းကန်တွေပေါ်က ခြစ်ရာစင်းရာတွေဖယ်မယ် 😇
ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးကြွေပန်းကန်လေး၊ကြွေအိုးလေးအပေါ်မှာခြစ်ရာစင်းရာတွေရှိနေပြီလား?မပူပါနဲ့။မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်းသုံးဇွန်းကို ရေနဲ့ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်၊ပြီးရင် အစင်းရာအခြစ်ရာတွေပေါ်မှာသုတ်လိုက်ပါ။ခဏကြာရင် ရေစွတ်ထားတဲ့အ၀တ်စလေးနဲ့သုတ်ချပေးလိုက်ရုံပါပဲ။အစင်းရာအခြစ်ရာတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
*အနံ့ဆိုးထွက်နေတဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါတွေ သန့်ရှင်းမယ် 🧐
သိမ်းထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ အနံ့တစ်မျိုးမျိုးထွက်နေတတ်ပါတယ်။ပုံမှန်လျှော်ဖွပ်ခြင်းမရှိတဲ့အခါတွေမှာလည်း အနံ့ဆိုးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါအနံ့ဆိုးတွေကင်းစင်သွားအောင် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ခွက်တစ်ဝက်ကိုယူ၊အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ မျက်နှာသုတ်ပုဝါတွေရော၊မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတစ်ဝက်ကိုပါရောထည့်ပြီးလျှော်ဖွပ်လိုက်ပါ။
ညစ်ပေနေတဲ့အစွန်းတွေက တော်ရုံဆပ်ပြာမှုန့်အစွမ်းလောက်နဲ့မရပါဘူး။မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သန့်ရှင်းသွားအောင် ဆပ်ပြာမှုန့်အစား ရှာလကာရည်ကိုသုံးပြီးဖော့တုံးနဲ့လိုက်သုတ်လိုက်ပါ။၅မိနစ်လောက်ထားပြီး ဆပ်ပြာနဲ့သေချာပြန်သန့်စင်လိုက်ရင် သန့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ရှာလကာရည်များများသုတ်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ကဲ လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတွေဖြစ်လို့ သေချာမှတ်ထားကြနော် 😉
အိမျသနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့ အခြိနျတှအေမြားကွီးပေးနရေပွီလား။လလေ့ာခကျြတှအေရဆိုရငျ ဒီလိုအိမျသနျ့ရှငျးရေးတှေ၊အိမျအလုပျတှလေုပျရတာ မိနျးကလေးတှအေတှကျ ၂.၆နာရီကွာမွငျ့ပွီး ယောကျြားလေးတှကေတော့ ၂.၁နာရီကွာမွငျ့ပါတယျတဲ့။အခြိနျတှအေကွာကွီးလုပျနရေရငျ အဆငျမပွေ
ဘူးလနေျော။ဒါကွောငျ့ Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ မွနျလညျးမွနျမယျ။အလုပျလညျးတှငျမယျ့လှယျကူတဲ့နညျးလမျးလေးတဈခြို့ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
*အကြီမှာ မှငျတှစှေနျးကုနျရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ? 🤔
*ကွှထေညျ အိုး၊ပနျးကနျတှပေျေါက ခွဈရာစငျးရာတှဖေယျမယျ 😇
*အနံ့ဆိုးထှကျနတေဲ့မကျြနှာသုတျပုဝါတှေ သနျ့ရှငျးမယျ 🧐
ညဈပနေတေဲ့အစှနျးတှကေ တျောရုံဆပျပွာမှုနျ့အစှမျးလောကျနဲ့မရပါဘူး။မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့သနျ့ရှငျးသှားအောငျ ဆပျပွာမှုနျ့အစား ရှာလကာရညျကိုသုံးပွီးဖော့တုံးနဲ့လိုကျသုတျလိုကျပါ။၅မိနဈလောကျထားပွီး ဆပျပွာနဲ့သခြောပွနျသနျ့စငျလိုကျရငျ သနျ့ရှငျးသှားပါလိမျ့မယျ။ရှာလကာရညျမြားမြားသုတျထားရငျပိုကောငျးပါတယျ။
ကဲ လှယျကူတဲ့နညျးလေးတှဖွေဈလို့ သခြောမှတျထားကွနျော 😉